सुषमा मानन्धर – मझेरी डट कम
रात पर्नु अगाडि
अहिले आइपरेको यो जटिल परिस्थितिको लागि म कत्तिको दोषी छु, मलाई थाहा छैन तर आफूलाई दोषैरहित पनि भन्न सक्दिन।
बैठकमा विभिन्न विधाका प्रतिनिधिहरू विधान लेख्ने मूल विषयमा छलफल गर्न नै उपस्थित भएका थिए तर बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि नै अर्को विषयले शिर उठायो ।
युवामञ्च २०६८ पुस
दुई वर्ष अगाडि खोलिएको गजब बहादुरको ‘तगडा पोल्ट्री र्फम’ले स्थापित भएर अलिकति नाफा के कमाउन थालेथ्यो, बर्ड फ्लुको हल्ला आइहाल्यो ।
“तँ कत्ति भाग्यमानी छस् । काठमाडौँमा घर, प्रशस्त सम्पति, कमाऊ लोग्ने र दुइ आँखा जस्ता छोराछोरी । के को पिर छ तँलाई ।”
सुकविता : मन
मेरो मन, मेरै अवयव,
अनियन्त्रित घोडा जस्तो
बशमा छैन मेरो ।
कसैको सुन्दैन ।
बाँध्न सक्दिन ।
सोधेर नि सपनीमा सुटुक्क कोही आउँछ र ?
मीठो पीडा प्रणयको अनायसै जगाउँछ र ?
घाउ कस्तो अनौठो मुटुभित्र आज पाएँ
अमृतको रस पनि पिएर कोही अघाउँछ र ?
सुकविता – नेपाल बन्द गरौँ
हिजो आज सजिलो छ, कुरा मनाउन
जाउँ साथी आज नेपाल बन्द गराउन
सरकार छैन यहाँ कुनै प्रतिकार छैन
जाउँ साथी आज नेपाल बन्द गराउन ।
एकतन्त्र गयो अब प्रजातन्त्र आ’छ
गर्नेलाई सबै छुट् झुट्पनि बोल्न पा’छ
यै हो मौका सडकबाट साधु थर्काउन
“डाक्टर साब, मेरो छोराले खानै मन गर्दैन, खायो कि वाकवाकी गर्छ । चाँडै थाक्छ । खेल्दा पनि खेल्दैन, धेरै सुस्त भैसक्यो । के भएको हो राम्ररी हेरिदिनुस् न है ।” सुस्केरासहित बुद्धवीर थचक्क मेचमा बस्यो । उसको एक्लो छोरालाई महिना दिनदेखि सन्चो थिएन । बिरामी भएको भनेर त्यसो त बच्चो ओछ्यानमै थला परेको थिएन तर अरू बच्चाहरूले जस्तो चुलबुल गर्न भने छाडेको थियो । अघिपछि त खरायोझैँ घरभरि उफ्रेको उफ्र्यै गर्थ्यो, एकछिन चुप लागेर नबस्ने । सन्चो हुन छाडेपछि भने छोरो घरमा भएको-नभएको पत्तै हुन छाड्यो । ऊ निन्याउरो मुख लाउँदै स्कुल गएर आउँथ्यो, जसोतसो होमवर्क सकाएर पल्टिरहन्थ्यो । केही सोधे पनि मन लगाएर जवाफ फर्काउँदैनथ्यो, केवल चुप लागेर बसिरहन्थ्यो । छोराको चाला देखेर घरमा सबै आत्तिए । बुद्धवीर बढी आत्तियो । नआत्तियोस् पनि किन । एक्लो छोरा, त्यो पनि उमेर ढल्केपछि पाएको । योभन्दा अघि दुइटी छोरी उसका । जेठीको त अझ बिहे गर्ने उमेर पनि हुन थालिसक्यो ।
हिउँ र म
झ्यालको पारदर्शी काँचबाहिर परेको
हिउँसँग रात झरिरह्यो।
भित्ताबाहिर खोपामा बास बसेको परेवा
साथ छुटेर हो वा एक्लोपनामा
रातभर घुरिरह्यो, म ब्यूँझिरहेँ।
हिजो-आज फेरियौ रे
हिजो-आज फेरियौ रे भन्नै पर्ने भा’को छ
लामो कुरा गर्छु भन्दा सातो किन गा’को छ
संसार यो तिम्रो मात्र पेवा हुँदै होइन
बोल्न सक्ने बेला-बखत् हाम्रो पनि आ’को छ
सिधा-सादा मानिसको जमाना नै छैन
बेइमानले इमान् सब बेची पनि खा’को छ
किन गर्यौ काम यस्तो मुटु जलाउने
ढुंगा हानी मन्तालमा किन चलाउने
भनुँ भने तिमी आफू बिग्रेका नि हैनौ
बिगार्यौ यो मेरो मन सिँगै गलाउने
बोलाएर बाटो लाग्यौ पर्खेका चैं छैनौ
किन व्यर्थ सुतेकाको निँद् खल्बलाउने
अझै पनि मेरो माया लाग्दो होला तिमीलाई
तीता-मीठा सम्झनाले डाक्दो होला तिमीलाई
टाढिएका तिमी भन हाल्खबर के छ साथी
कल्पनाको कुहिराले ढाक्दो होला तिमीलाई
कालो रात अँध्यारो छताराजून छैन राति
बादलुले लुकाएर ढाँट्दो होला तिमीलाई
कुन्नि किन ढाँट्यौ मलाई मेरो के विराम थियो
मनभित्र सम्झिरा’को मात्र तिम्रो नाम थियो
बोलुँ बोलुँ लाग्थ्यो मलाई सधैंभरि तिमीसित
भूल गरें प्रीतलाई तिमी जस्तो “बििज”सित
माया गर्छु भन्ने कुनै शब्द छैन किन होला
फर्किएर तिमीले मलाई हेर्ने कुन दिन होला
पारदर्शी काँच बाहिर
रात बहिरह्यो ।
भित्ता बाहिरको खोपामा
बास बसेको परेवा
साथ छुटेर हो
सुस्ताउँदै घुरिरह्यो ।
हतार हतार हिँडिरहेको उसले अत्यास लागेर एकपव्ट फेरि माथि हेर्यो । ऊ , … त्यो पहाडको टुप्पो । टुप्पोमा रहेको त्यो मन्दिर । ऊ त्यही पुग्नलाई हिँडेको छ । ठाडो उकालो र साँघुरो ढुङ्गे बाटोले गर्दा त्यहाँसम्म पुग्न विकट नै छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि त्यहाँ साक्षात् ईश्वर बस्छन् र त्यहाँ पुगेपछि आफ्नो कुनै पनि कामना पूरा हुन्छ भन्ने आस्था र प्रचलित विश्वासका कारण उसले मन्दिरमा पुग्नुलाई आफ्नो गन्तव्य बनाएको छ ।
रात रहे… !
जागिर खाएको वर्षौं भैसक्यो तर उसको बढुवा भएको छैन । यसबीचमा एक दुई पल्ट बढुवाको लागि पदहरू नखोलिएका पनि हैनन् तर उसले नाम निकाल्न सकेन । अब यसलाई उसको दुर्भाग्य भन्ने हो वा म्यानेजमेन्टले नै नचाहेको, यकीन भन्न गाह्रो छ । ऊ मिहिनेती र इमान्दार छ र पनि ऊ भन्दा कनिष्ठहरूले धमाधम बढुवा खाइसके । प्रभुको लीला ठान्दै उसले आफ्नो पालो पर्खेको छ ।
जीवन, देशको एक ठूलो पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ता । एक अर्थमा भन्नु पर्दा दरै हात । केही दिन अघि नै उसको पार्टीले चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसकेको छ । त्यसै क्रममा सरकारलाई आफ्ना मागहरू पूरा गराउन दबाब दिनको लागि आज उसको पार्टीले बन्दको आयोजना गरेको हो । सरकारको पनि खै ! टायरको तातोले सडक नतताई,भिडन्त र दुइचार तोडफोड नभै कानमा बतासै लाग्दैन । जायज मागहरू पूरा गर्नु त परै जावोस्, सुनिदिने आश्वासनसम्म पनि दिंदैन ।
“तेरो बूढा आज पनि त्यही नखरमाउली केटीसँग सुपरमार्केटमा घुम्दै थिए । मैले नदेखेझैँ गरँे । हैन, कति दिन चुप लागेर बस्छेस् ? किन केही भन्दिनस् आफ्नो बूढालाई ?” जुनाकी साथीले पिर मान्दै सोध्दै थिई ।
दिल घायल छ मेरो
दिल घायल छ मेरो, हेर्दैमा देखिंदैन
खोपेको नाम तिम्रो, केर्दैमा मेटिंदैन
निकै चोटि परीक्षा, यो प्रेमको लिइयो
प्रेम अमर छ मेरो, रेट्दैमा रेटिंदैन ।
साँझ, तारा र जून
टोलाउँदै म ।
झुकेका यी नयन
मन् छ घायल ।